Rabitaanka xad dhaafka ee galmo ayaa WHO ku sifeysay mushkilad nafsi ah… – Hagaag.com
Rabitaanka xad dhaafka ee galmo ayaa WHO ku sifeysay mushkilad nafsi ah…
Posted on 16 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ku sifeeyey “Rabitaanka saa’idka ee galmo” mushkilad nafsi ah, laakiin looma aqoonsana dhaqankaasi inuu gaaray heerka balwada ama qabatinka.
Erayga “qabatinka galmo” ayaa abuuray muran muddo badan, laakiin khubarada ayaa isku afgaranwaayey tilmaamida xaalada saxda ah ee qabatinka.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa qaaday in ay horumariso liiska ugu dambeeya ee cudurada iyo xanuunada dunida oo dhan, tallaabo loo qaaday dhinaca sharcyadai fahamka fikradda, iyada oo loo aqoonsanayo “rabitaanka xad-dhaafka ah ee galmo” uu yahay mushkilad nafsi ah.
Laakiin Ururkan taabacsan Qaramada Midoobay ma aysan gaarin sharaxaad ka mid ah dabeecaddaasi in ay la simaan tahay qabatin, sida daroogada ama khamaarka, waxayna sheegeen in baahi loo qabo in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah inta aan la gaadhin heerka uu qabatinka.
Jeffrey Reed, oo ah khabiir ka tirsan ururka, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP maalintii Sabtiga, “. Haddii aan la buunbuunin, weli ma gaarin caddeyn ilaa iyo haatan muujinaysa in rabitaanka xad dhaafka ee galmo in ay u dhiganto sida khamriga ama droogada heroin”
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sheegay in dood cilmi ay weli socoto oo ku saabsan “haddii rabitaanka xad-dhaafka ee galmada loo aqoonsanayo balwad qabatin ah ee dhaqameed”.